ठूला नै मान्दैनन् कानुन, सेतो प्लेटलाई रातो बनाएर दुरुपयोग, कसले के के गरे ?
प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुण १ मंगलबार , १,८०६ पटक हेरिएको
सरकारी अधिकारीले सेतो प्लेटलाई रातो बनाउनुको भित्री उद्देश्य नै गाडीको चरम दुरुपयोग गर्नु हो। रातो प्लेट बनाएपछि गाडी व्यक्तिगत काममा बढी प्रयोग गर्न पाइने लोभमा सरकारी अधिकारी छन्।
‘रातो प्लेट राख्दा घरका लागि आवश्यक तरकारी, चामल बोक्न पाइने, केटाकेटी बोक्न पाइने र घुमघाममा लैजान पाइन्छ’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने। ती अधिकृतले उच्चपदस्थले अनियमित डिलिङमा जाँदा कसैले थाहा नपाउन् भन्नका लागि रातो प्लेट बनाउन क्रियाशील भएका हुन्।
गृहले पनि त्यस्ता पदाधिकारीलाई निस्ःसंकोच सुविधा दिइरहेको छ। गृहका केही अधिकारीस“ग मिलेमतो गरी सचिवसहसचिवले गाडी दुरुपयोग गर्ने लाइसेन्स लिन सफल भइरहेको गृहका कर्मचारीको आरोप छ।
रातो प्लेटका लागि स्वीकृत लिएका मन्त्री –
संवैधानिक निकाय तथा आयोगका पदाधिकारी –
– प्राय सबै मन्त्रालयले मातहतका एक(दुई गाडीमा रातो प्लेटको अनुमति
सरकारी – सेतो
कूटनीतिक नियोग – नीलो
सार्वजनिक संस्थान– पहेंलो
प्राइभेट – रातो
भाडाको – कालो (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
बाटोमा हिंड्दा उता कानुन गर्भवतीलाई पनि, यता साँढे प्रवृत्ति
नेपालको कानुनः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने
बल्ल बन्यो स्थानीय तह सञ्चालन कानुन
नेपालका कानुन दैव जानून्......कारागार नबसेरै कैद भुक्तान ?
कानुन अभावले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव रोकिदैन : मन्त्री थापा
नेपालमा कानुन बनाउन विदेशीसँग प्रशिक्षण, मान्यताविपरीत २८ कर्मचारी सहभागी, को को छन् ?
सवारी ब्याक गरेर घाइते यात्रु मार्नेविरुद्ध कानुन बनाउन माग
यसरी विस्थापित हुँदैछ १६३ वर्ष पुरानो कानुन
'लो बिडिङ' निरुत्साहित गर्ने कानुन आयो